Umzimveliso-Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd.
Ulawulo loMbane lwezoMbane
Ifanelekile zombane, iimoto, intsimbi, oomatshini, ukutya, amayeza njl.
Indlela yemveli yesikhokelo yokuvavanya ukusetyenziswa kwamandla kweentlobo ngeentlobo zeefektri kukhokelela kungaphelelanga, idatha engachanekanga kwaye engaphelelanga yedatha yokusebenzisa amandla, eyenza kungabikho mfuneko yokuhlalutya kunye nokuchonga ukusetyenziswa kombane, okukhokelela kulawulo olungasetyenziswanga kombane kunye nezixhobo ezahlukeneyo Akukho kusebenza Iindlela zokulawula ukusetyenziswa kwamandla, ke ngoko kukho inkunkuma eyahlukeneyo yombane. Isisombululo senkqubo yokujonga umbane kumzi-mveliso sinokuhamba ngaphandle kwentambo sinokuhambisa idatha yedatha yezixhobo ezahlukeneyo kumzi-mveliso ngexesha elifanelekileyo, elungele abaphathi ukuba babeke esweni kwaye bahlaziye ukusetyenziswa kombane kuyo yonke umzi-mveliso nangaliphi na ixesha, ukuze kuqiniswe Ulawulo lokusetyenziswa kombane kumzi-mveliso, ukunciphisa ukusetyenziswa kombane kunye nokuvelisa izibonelelo zokonga amandla.
Isisombululo solawulo semveliso yokuvelisa amashishini sidibanisa amasango anobukrelekrele, umlinganiso okrelekrele kunye nezixhobo zokulawula, ukuguqula idatha ekrelekrele, izixhobo zokujonga amandla kunye nezinye iimveliso ezenzekelayo zeshishini. Phakathi kwazo, imitha yombane esebenza ngemisebenzi emininzi inoxanduva lokuqokelela iiparamitha zokusetyenziswa kwamandla kunye nomgangatho wedatha yamandla ahlukeneyo okusebenzisa amandla kwindawo nganye yezityalo, kunye nokuhambisa yonke idatha yokusetyenziswa kwamandla kwisityalo kwinkqubo yolawulo lwamandla e-smart ngokusebenzisa umatshini wokuphatha unxibelelwano, ukuze ubeke iliso kuyo idatha yokusetyenziswa kwamandla kunye nokuhlalutya, ukunceda abasebenzisi bafumane indawo yokugcina amandla, ukubonelela ngenkxaso yedatha yokusetyenziswa kwamandla kubasebenzisi ukwenza amanyathelo okonga amandla kunye neenkqubo, kwaye ekugqibeleni bayiphumeze injongo yokuphucula amandla apheleleyo ukusebenza ngempumelelo nolawulo lokusetyenziswa kwendawo yezityalo.
Ukusebenza kwamandla kwenkqubo yolawulo lwamandla kumzi-mveliso
Emva kokuzazisa ngezisombululo zokulawulwa kwamandla amashishini, abathengi banakho ukubona ezi zibonelelo zilandelayo:
I-7 * yeeyure ezingama-24 zokujonga ixesha lokwenyani: Iqonga lolawulo lwamandla lixhasa isikhangeli sewebhu, kwaye abasebenzisi bayakwazi ukubona ukujonga okwenyani kwexesha lokusebenza kunye nemeko yokusetyenziswa kwamandla kwezixhobo ezahlukeneyo kwindawo yezityalo kusetyenziswa izixhobo ezifanelekileyo, kwaye ine umsebenzi we-alamu wangempela-wokuqonda ukusebenzisa amandla angaqhelekanga.
Ukubonwa kwamandla: abathengi banokufumana ukuqonda ngokubanzi kokusetyenziswa kwamasebe ahlukeneyo kunye namajelo eendaba osetyenziso lwamandla kusetyenziswa inkqubo kanban yenkqubo yamandla. Abathengi banokufunda malunga nemeko yezixhobo ngokweenkcukacha ngokusebenzisa isikhangeli sewebhu, ukuqonda ulwazi lwamandla nangaliphi na ixesha naphi na, kwaye basebenzise amandla asetyenziswayo Ukuhlalutya izixhobo ngokusetyenziswa kwesixhobo samandla, ukuqikelela ukusilela kwezixhobo, ukunciphisa izinga lokungaphumeleli kwezixhobo.
Yenza isicwangciso-nkqubo sokugcina amandla esayensi: Abalawuli bezixhobo banokusombulula iingxaki ezifana nokuchaphazeleka kwedatha kunye neenkcukacha ezichanekileyo ekufundeni kwemitha yomntu ngenkqubo yokulawulwa kwamandla alumkileyo, ukuhlalutya idatha yokusetyenziswa kwamandla kweenxalenye ezahlukeneyo kunye nezixhobo kwangexesha, nokulawula amandla iindleko zokusebenzisa kunye namandla. Yila izicwangciso zamandla kunye nokuphucula ulawulo lwamandla.
Seka izikhombisi zomsebenzi ezifanelekileyo zamandla: Ngokujonga isibonisi sokwenza umsebenzi kunye nokubek'esweni, nokubeka emgangathweni ngokusetyenziswa kwamandla, ukuqokelelwa kwedatha kunokwenziwa ngokokusebenza, amasebe, iinkqubo, amaqela, imigca yokuvelisa okanye izixhobo, kunye nezalathi zeKPI zokuvavanywa kokusetyenziswa kwamandla yenzelwe ukufikelela kwiinjongo zokonga amandla.
Ukulungisa iindleko zombane kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle kwamandla: ingxelo ebanzi yolawulo lwamandla inokubuza idatha eyimbali kwi-Intanethi, kwaye inamanani ohlukeneyo wamandla kunye nezixhobo zokuhlalutya izixhobo zokuchonga ii-loops ngombane ophantsi kunye nokuphumeza amanyathelo okuphucula amandla; Ukusetyenziswa kwamandla Amandla okunyanzelisa ialarm, uhlalutyo lwemeko, ukunyusa intaba kunye nokuzaliswa kwentlambo kunye nolawulo lokuvala lomthwalo ukunciphisa umda wamandla kunye nokuthintela ukohlwaywa okuthe gabalala kokusetyenziswa kombane.
Ulawulo loMbane weFektri lufanelekile zombane, iimoto, intsimbi, oomatshini, ukutya, amayeza njl njl.